सुदूरपश्चिमबाहेक अरू प्रदेशमा आज वर्षाको सम्भावना Ukeraa – Latest and featured news from Nepal.
सुदूरपश्चिमबाहेक अरू प्रदेशमा आज वर्षाको सम्भावना
काठमाडौंः मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अरू प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। हाल देशको प्रदेश १, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको र अन्य भूभागमा स्थानीय वायु, पश्चिमी वायु तथा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा रहेको पूर्व-पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ।
यतिबेला प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनीका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ।
आज दिउँसो प्रदेश १, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
आज राति पनि यही मौसम प्रणाली रहनेछ। साथै प्रदेश १ का एक वा दुई स्थानहरूमा भीषण वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ।
२०७९ असार ०९ गते ७:५३ मा प्रकाशित
मन्त्री पद गएका आले, श्रेष्ठ बैठकमा किन आएनन् ? प्रवक्ता र महासचिवलाइनै थाहा छैन
२०७९ असार १३ गते १७:३४ मा प्रकाशित
उनीहरूले बैठकमा आउने–नआउने जानकारी पार्टीमा नदिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। ‘उहाँहरू आउने नआउने बारे मलाई केही जानकारी भएन। अध्यक्ष ज्यूलाई खबर गर्नुभएको भए थाहा भएन,’....